बजेटमा ब्याजको विषयमा वेवास्ता
- मनिषकुमार मारु
नयाँ बजेटले सिमेन्ट उद्योगलाई खासै फरक पारेको छैन । बरु खाद्यान्नलाई अलि धेरै असर गरेको छ ।
हामीले अझै राम्रो बजेट आउँछ भन्ने सोचेका थियौं । व्यवसायीलाई राहत दिने खाल्को बजेट आएन ।
खासगरी कोरोना अनि लकडाउनका कारण थलिएका इन्डस्ट्रिहरुलाई ब्याजमा छुट दिने गरी बजेट आउँछ कि भन्ने आशा थियो, आएन । सरकारले जसरी भएपनि ब्याज तिर भनेको छ, अब गाह्रो छ । यो बिचमा उद्योग, व्यापार त ठप्प छ । २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्योगहरु चलेका छन् । यस्तो अवस्थामा कामदारलाई दिन र अरु अपरेटिङ लागत त तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, ब्याज कसरी तिर्ने रु यो हिसाबले अब धेरै उद्योगीहरु ब्लाक लिस्टमा जान्छन् । यसलाई एडजस्ट गर्न धेरै गाह्रो छ र समय लाग्छ ।
अहिले उद्योगहरु चौतर्फी समस्यामा छन् । यातायात र उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा कुनै पनि इन्डस्ट्रिले कच्चा पदार्थ दिनै सकेका छैनन् । हाम्रै सिमेन्ट उद्योगले पनि कच्चा पदार्थ पाइरहेकोछैन । कसरी उत्पादन गर्ने ? इन्डियाबाट पनि आउन पाउँदैन, नेपालमा पनि पर्याप्त उत्पादन छैन ।
जनकपुरबाट ल्याउँदा ५/७ सय भाडा लाग्नेमा अहिले १५ सय पुगेको छ । किलंकरको मूल्य ६/७ हजार रुपैयाँ थियो ९ हजार पुगेको छ । भारतबाट क्लिंकर त आउनै सकेको छैन । यस्तो महँगोमा उत्पादन गरेर कतिमा बेच्ने ?
त्यसैले सरकारले बजेटका केही प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्योग टिक्नु भनेको त्यसका लगानीकर्ताको लागि मात्र होइन, त्यहाँ आश्रित हजारौं मजदुर अनि देशको राजस्वको लागिसमेत फाइदाजनक हुन्छ । तर अहिलेको बजेटले ब्याजमा लिएको नीतिका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारीहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् । उत्पादन नै छैन भने कसरी ब्याज तिर्ने ? त्योभन्दा पहिले त कर्मचारी, कामदारको रोजीरोटीको व्यवस्था हुनुपर्छ होला ।
त्यसैले ब्याजको सीमालाई केही बढाउनुपर्छ । साथै उत्पादनमुलक उद्योगलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ । उत्पादनविना आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन । आत्मनिर्भर नहुने हो भने समग्र देश आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पछि पर्छ । कोरोनाका कारण स्वदेश फर्केका नेपालीहरुलाई फेरी रोजगारी दिने सवाल पनि छ । त्यसको लागि पनि स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दै जानुपर्छ ।
(मारु बन्धन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष हुन् ।)
बुधबार २१, जेठ २०७७
Ekdum sahe.....🙏🙏🙏 Sab doctor financial minster haru testai 6an kaam na lagnay
विराटनगरमा पाँच वर्षीय बालकको डुबेर मृत्यु
झापामा खोलाले बगाएर एक जनाको मृत्यु
विराटनगरका ९५ घर डुबानमा, ४५० जनाको उद्दार
धनकुटाको चौबिसेमा ३२ वर्षीया महिलाको डुबेर मृत्यु
नेपालमा थप १४४ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित १६ हजार ९ सय ४५ पुग्यो
भोजपुरको पौवादुङमामा अतिविपन्न परिवारलाई सोलार सेट वितरण